तपाइँको स्मार्टफोनमा आपतकालीन कलहरू कसरी कन्फिगर गर्ने Androidsis
तपाइँको स्मार्टफोनमा आपतकालीन कलहरू कसरी कन्फिगर गर्ने
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | सुरक्षा, ट्यूटोरियलहरू
पक्का हामी सबैको सम्पर्क छ जुन «AA with को साथ हाम्रो स्मार्टफोनको एजेन्डामा शुरू हुन्छ। मानिन्छ हाम्रो एजेन्डा मा महत्वपूर्ण व्यक्ति संग जोडिएको। यो केहि हो जुन हामी सबैले यी छनौट गरिएका सम्पर्कहरू हाम्रो एजेन्डाको शीर्षमा देखिनका लागि गर्यौं। अनि त्यो यो दुर्घटना वा आपतकालिन अवस्थामा, को लागी प्रयोग गरीन्थ्यो, तिनीहरूले सजिलै हाम्रो टेलिफोन प्रयोग गरीएको व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न सक्थे.
1 सम्पर्क "AAA" + नाम अब अधिक अर्थ बनाउँदैन।
2 फोन लक भएको संग आपतकालीन कलको लागि नम्बर सेट अप गर्नुहोस्।
सम्पर्क "AAA" + नाम अब अधिक अर्थ बनाउँदैन।
तर केहि समय पहिले हामीलाई सेवा गर्ने यो सावधानी अब अप्रचलित छ। नामको अगाडि हाम्रो विश्वसनीय सम्पर्कहरू "AAA" मा थप्नाले अब धेरै अर्थ राख्दैन। र यद्यपि यो छ केहि कुरा जुन हामी सबैले उही रेड क्रसको अभियानमा सल्लाह दियौं। यो अब अधिक गर्दैन।
टर्मिनलमा हामी आज प्रयोग गर्दछौं यो पहिले सम्पर्क बनाउनको लागि धेरै गर्दैन यदि हामी फोन अनलक गर्न सक्दैनौं भने। एकछिनको लागि कल्पना गर्नुहोस् कि हामी सडकमा एक जना मानिस बेहोश भएको देख्छौं। सम्बन्धित आपतकालिन सेवाहरूलाई राम्रो नागरिकको रूपमा सल्लाह दिनुका साथै हामीलाई तपाईको परिवारलाई सम्पर्क गर्न पनि आउँदछ। यो गर्नका लागि हामी पीडितको फोन भुइँबाट लिन्छौं, तर जब हामी कुनै सम्पर्क खोज्न चाहन्छौं: lock अनलक ढाँचा प्रविष्ट गर्नुहोस् »।
यो दिएमा, हामी थोरै गर्न सक्छौं। कोड वा प्याटर्न लकको साथ फोनका सम्पर्कहरू पहुँच गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुनेछ। तर यदि हामी अवलोकन गर्दछौं, बिन्दुहरूको मुनि मात्र ढाँचा परिचय दिनका लागि, वा कोडले numbers आपतकालिन says भन्छ। लक सहित पनि फोनले हामीलाई आपतकालिन कल गर्न अनुमति दिनेछ। तर संकेत गरिए अनुसार यसले हामीलाई आपतकालीन सेवा नम्बरहरू मात्र डायल गर्न अनुमति दिनेछ। तर यदि हामी परिवारको सदस्यलाई सूचित गर्न चाहन्छौं भने के हुन्छ?
आज Androidsis मा हामी तपाईंलाई सम्पर्क (हरू) लाई कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर सिकाउनेछौं जुन हामी आपतकालीन नम्बरहरूको रूपमा चाहन्छौं। यस तरिकाले, यदि कोहीले हाम्रो स्मार्टफोनबाट आपतकालिन कल गर्न चाहन्छ भने, तिनीहरूले कल गर्न सक्छन्, उदाहरणका लागि, हाम्रो पार्टनर, वा आमाबुवा, टर्मिनलको फोनबुक पहुँच नगरीकन। के?। पढ्न जारी राख्नुहोस्।
फोन लक भएको संग आपतकालीन कलको लागि नम्बर सेट अप गर्नुहोस्।
दुर्भाग्यवस, आईओएस, एन्ड्रोइड जस्तो छैन एन्ड्रोइड को नयाँ संस्करण को आगमन सम्म यो संभावना छैन। तर यदि तपाइँको स्मार्टफोन अझै लामो प्रतीक्षारत अपडेट प्राप्त भएको छैन भने हामी तपाईलाई समाधान पनि दिन्छौं। हाम्रो फोनको सेटिंग्स विकल्प पहुँच गर्दै। सेटिंग्सबाट हामी लक स्क्रीन खोज्छौं। एक पटक भित्र हामीले सेक्शन प्रविष्ट गर्नुपर्छ सुरक्षा। र अन्तमा हामी पहुँच गर्छौं मालिक जानकारी.
यहाँ एक पटक हामी सक्दछौं मालिक जानकारी दृश्यमान बनाउनुहोस्। र यस जानकारी प्रविष्ट गर्नका लागि उपलब्ध फिल्डमा हामी इच्छित फोन नम्बर थप्न सक्छौं. यस तरिकाबाट, छनौट गरिएको फोन नम्बर सधैं फोनको लक स्क्रीनमा देखिनेछ।। त्यसोभए यदि कसैले हाम्रो फोन फेला पारेमा, यसले तपाईलाई सम्पर्क गर्न मद्दत गर्दछ यदि तपाई मालिक खोज्दै हुनुहुन्छ भने।
हालसालका समयमा हाम्रो स्मार्टफोनले अधिक र अधिक उत्साहका साथ हाम्रो निजी डेटा सुरक्षित गर्दछ। र यसको लागि हामीसँग धेरै प्रकारका लकहरू छन्। सम्भावित बान्कीका ढाँचाहरू, अक्षरांकीय कोडहरू, र अब फिंगरप्रिन्ट पनि। अर्को के हो भनेर उल्लेख नगर्नुहोस्, आईरिस पढाइ वा अनुहार पहिचान। यो सबै हाम्रो डाटा सुरक्षित राख्न ठीक छ। तर समय समयमा यो सोच्नु राम्रो हुन्छ कि कुनै अवसरमा हामीलाई कसैलाई हाम्रो मद्दतको लागि स्मार्टफोन प्रयोग गर्न आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यहाँ धेरै खेल अनुप्रयोगहरू छन् जसले हामीलाई आफ्नै देखभाल गर्न मद्दत गर्दछ। र लगभग सबै हामीसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुप्रयोगहरू हाम्रा उपकरणहरूमा स्थापना गरिएको छ जुन हामी डेटा बचत गर्न प्रयोग गर्दछौं। वा पनि लक्षणहरू पहिचान गर्न वा उपचारहरू लागू गर्न। तर यी सिफारिशहरूलाई ध्यानमा राख्नु राम्रो हुन्छ ताकि हाम्रो स्मार्टफोनले पनि आपतकालमा मद्दत पुर्‍याउँछ.
यदि तपाईंको स्मार्टफोनमा पहिले नै एन्ड्रोइड .7.0.० संस्करण स्थापना गरिएको छ भने, तपाईं सिधा आपतकालीन नम्बरहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए जसले तपाईंको फोन फेला पारे उसले त्यो नम्बरमा कल गर्न सक्दछ जुन हामीले अघिल्लो कन्फिगर गरेको थियो। तर यदि होईन भने, सम्पर्कलाई दृश्यात्मक बनाउन यो ठूलो सहयोगी हुन सक्छ कि उनीहरू दुर्घटना वा नोक्सानको स्थितिमा बदलिन सक्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » ट्यूटोरियलहरू » सुरक्षा » तपाइँको स्मार्टफोनमा आपतकालीन कलहरू कसरी कन्फिगर गर्ने
एप्पल र सामसु। बीचको प्याटेन्ट उल्ल .्घन मुद्दा यसको मूलमा फर्किन्छ
Meizu M5s अर्को हप्ता अनावरण गर्न को लागी तयार छ